AmaSandals Resorts and Sandals Foundation: Ukunika Abantu Amandla
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Unomthwalo wemfanelo » AmaSandals Resorts and Sandals Foundation: Ukunika Abantu Amandla
Izindaba zase-Antigua neBarbuda • Izindaba zeBahamas Breaking • Izindaba zeBarbados Breaking • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Amasiko • Imfundo • Izindaba zeGrenada Breaking • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Investments • Izindaba zaseJamaica • Izindaba • Ukwakha kabusha • Izindawo zokuhlala • Unomthwalo wemfanelo • Izindaba zaseSanta Lucia • Ezokuvakasha • Iziphesheli Zokuvakasha | Izeluleko Zokuhamba • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba Ezihlukahlukene
Ama-Sandals Resorts International adaliwe Izimbadada Foundation, futhi inale filosofi: Sibonile ukuthi uma sitshala imali kumuntu oyedwa, sinika amandla inethiwekhi yonke yabantu - imindeni yabo, abangane, imiphakathi kanye nezizwe ezikulungele ukuzuza eminikelweni yazo.
“Ingxenye engcono kakhulu yokubandakanyeka kulo msebenzi ukwazi ukuthi ekugcineni kosuku, ngaphandle kokusebenza kanzima futhi ngezinye izikhathi kunezinselelo ezinkulu, sisiza ekwenzeni izimpilo zabantu zibe ngcono,” kusho uJoseph Wright, iGreat Shape! Inc, Umqondisi Ophethe.
Izinselelo ezibhekene neCaribbean zehlukene futhi ziyinkimbinkimbi njengabantu ezibathintayo. Imiphakathi kumele ilwe nezinkinga ezifana nobuphofu, ukungalingani, nodlame usuku ngalunye. Ngokusebenzisana kakhulu nezinhlaka zikahulumeni, abaholi bezenhlalakahle, kanye nabanikeli abazimele, oSandals basiza ekwakheni izixazululo ezintsha ezizinzile ezinikeza amandla intsha, abesifazane, osomabhizinisi bendawo kanye nalabo abahlwempu.
Izinhlelo ZamaSandals Namaphrojekthi
Isikole Samabhizinisi Osomabhizinisi (Ukuqeqeshwa Kwezamabhizinisi)
“Nika Umuntu Inhlanzi, Uyondle Ngosuku. Fundisa Umuntu Ukudoba, bese Umondla Isikhathi Eside Sokuphila. ” Ukuqeqeshwa kwezamabhizinisi kuklanyelwe ukuhlinzeka abantu ngabanye ukuthuthukisa amakhono adingekayo okukhomba, ukuqala, nokukhulisa ibhizinisi eliphumelelayo, ukuzakhela amathuba emisebenzi bona kanye namanye amalungu emiphakathi yabo.
Ukuzibandakanya kwangempela kwentsha kuzuzisa imiphakathi, izinhlangano nezizwe ngokubanzi. Amandla okubandakanya intsha esemngciphekweni kubalulekile ekuqinisekiseni ikusasa elihle kunoma yisiphi isizwe. Abantu abasha bayazuza futhi bathole amakhono empilo namathuba ezifundo ngokusebenzisa ezemidlalo, umculo, ukuqeqeshwa kwamakhono, kanye nezinye izinhlelo zokungenelela.
Ukwenza ngcono ukunakekelwa kwezempilo
Izingane ezandulela ukuzalwa ezizalelwa e-Antigua zinethuba elikhulu lokulwa kulandela ukunikelwa kwezikhungo ezi-2 eziphelele zokunakekelwa kwezinsana ezivela eSandals Foundation (zenani elicishe lifike ku- $ 20,000) Ophikweni Lwezingane lwaseMount St. John's Medical Center. Le mishini inikeza ukunakekelwa okubucayi ezinganeni zangaphambi kokubeletha lapho kunesidingo. Kuze kube manje, zingu-299 izingane ezisetshenzisile lezi zingxenye.
Enye yezinto ezibaluleke kakhulu emiphakathini eqinile yimpilo enhle, ngakho-ke, iSandals Foundation ibisebenza ngokuzikhandla eceleni kwezikhungo zezokwelapha ezifana neMount St. John's ukusiza ekwakheni amandla azo ngokunikeza ukufinyelela kuqeqesho, iminikelo yezinto zokusebenza ezidingeka kakhulu, kanye iminikelo yobuchwepheshe obusha obuxhumanisa izibhedlela zasekhaya nalezo zomhlaba wonke
Le mishini Yesikhungo Sokunakekelwa Kwezinsana inikeza ukunakekelwa okubucayi, njengokulawulwa kwezinga lokushisa, ukuqapha okubalulekile, ukukala isisindo, nosizo lokuphefumula ukuze kuzalwe abantwana ngaphambi kwesikhathi lapho kubonakala kudingekile.
Uhlelo Lomculo lukaFlanker
IFlanker Marching Band iyiqembu lentsha ethembisayo evela edolobheni elingaphakathi - umphakathi waseFlanker eMontego Bay, eJamaica. Ngesikhathi sohambo lweMega Fam, abezokuvakasha bahlangana ukuze banikele kwiFlanker's Resource Center.
Ukuxhaswa ngezimali kwalolu hlelo kuhlinzeke ngezinsimbi zomculo ezintsha nokulungiswa kwezinsimbi ezikhona, izifundo namathuluzi ezifundo zamasonto onke nezifundo ezisebenzayo, umfaniswano wamalungu ebhendi, umxhumanisi webhendi, kanye nemali yokuhlolwa yezivivinyo zezinga lethiyori. Leli qembu selinandisa ezingeni lapho selikhokhelwe ukudlala ezindaweni zokungcebeleka eziseSandals Montego Bay kanye ngesonto.
“Eminyakeni yami eminingi yesipiliyoni somculo, bengizazi izinhlangano ezisiza ngezinga losizo maqondana nezinhlelo zebhendi, kodwa iSandals Foundation iluthathe ikhwalithi yosizo lwayo wayisa kwelinye izinga. Ngiyaziqhenya ngokuthi iSandals Foundation ibe ngeyokuqala ukuhamba ibanga elide kangaka ukuvuselela uhlelo lweFlanker Marching Band, ”kusho uMikel Turner, onguMqondisi weBhendi.
“Ngaphambi kokuba yingxenye yeqembu, bengingazi ngempela ukuthi ngingaba yingxenye yeqembu kanjani nokuthi ngikholelwe kanjani kimina nasemakhonweni ami. Iqembu linginikeza engikubheke ngabomvu nendlela enhle yokuziveza, ”kusho ilungu leqembu uRenaldo Hendrick.
ISandals Foundation izibophezele esifundeni sonke seCaribbean ukuphendula ngokushesha ezimeni eziphuthumayo zikazwelonke ezibangelwa izinhlekelele zemvelo.
AbakwaSisekelo bacela ukwesekwa okuvela kuzivakashi ezivakashelwa, ababambisene nabo kwezohwebo, abasebenzela ezokuvakasha, abahlinzeki, nezinye izinhlangano ukuletha imiphakathi ethinteke enhlekeleleni. Ngokwengeziwe, izinhlangano zasendaweni ezisemhlabathini ziyabandakanyeka ukuqinisekisa ukuthi imizamo iyaqhubeka.
ISandals Foundation iyaqhubeka nokusebenzisana nohlelo lweSickKids Foundation Caribbean, ithinta iziqhingi zaseBahamas, iBarbados, iJamaica, iSt. Lucia, iSt. Vincent, kanye neGrenadines. Inhloso ukuhlinzeka ngoqeqesho nezinsizakusebenza zokuxilonga nokwelapha kangcono izingane ezinomdlavuza kanye nokuphazamiseka okukhulu kwegazi kulo lonke elaseCaribbean.
ISandals Foundation ibambe iqhaza elikhulu ekuxhaseni imizamo emikhulu emithathu:
Ukwakha igumbi le-telemedicine eSt. Lucia ukuze ochwepheshe bezokwelapha bendawo bakwazi ukwethula amacala eziguli kwaSickKids ukuthola izeluleko, kanye nokuxhuma odokotela eziqhingini ezingomakhelwane.
Ukuqeqeshwa kwe-oncologist yezingane, uDkt Chantelle Browne, ozobuyela ezweni lakhe, eBarbados, ngemuva kokuphothula ukuhlanganyela kweminyaka emibili eSibhedlela Sabantwana Abagulayo eToronto futhi abe ngudokotela wesibili womdlavuza wezingane e-Eastern Caribbean.
“Njengengxenye yeDivision of Hematology and Oncology kwaSickKids, ngizoba nethuba lokubheka futhi ngigxiliswe ekuphathweni kweziguli ezingaphezu kwezi-22,000 zaminyaka yonke ezivakashela eSears Cancer Clinic kanye nezingane ezibalelwa ku-350 ezisanda kutholakala zinomdlavuza unyaka nonyaka eToronto, ”kusho uDkt. Chantelle Brown.
Abesifazane Abasiza Abanye Baphumelele (i-WHOA)
ISandals Foundation neBob Marley Foundation bahlanganyele ndawonye ukuxazulula inkinga engapheli yokungalingani ngokobulili eCaribbean. I-WHOA inikeza ukusekelwa, ukuqeqeshwa, ukufundiswa, nokuqeqeshwa kwamakhono ukunika amandla abesifazane ababhekelwe phansi esifundeni sonke.